Soo dejisan Zune 4.8.2345 – Vessoft
Ciyaaryahan Media, Phone
Soo dejisan Zune
Zune – software ah waafajinta xogta u dhexeeya your computer iyo qalab ku salaysan habka hawlgalka Phone Windows ka. Zune waa ciyaaryahan warbaahinta kaas oo awood u ciyaaro files audio iyo video of qaabab kala duwan, sawirada aragtida iyo cajalladaha record. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ku darto files audio iyo video in Playlists, maareeyaan uruuriyaa images ama Nayroobi maktabadda multimedia ah. Zune ku jira dukaanka online ka dhisay-in-degsado kulan iyo codsiyada kala qeybsan yihiin kooxo kala duwan. Sidoo kale, adigoo isticmaalaya Zune ah waxaa suurto gal ah si loo casriyeeyo habka hawlgalka of smartphone ah.
.Wadashaqayntaas La smartphone ku salaysan Phone Windows
Waxaa la dhisay-in dukaanka
Kartida ay u cusboonaysiiyaan habka hawlgalka of smartphone ugu
Comments on Zune:
Zune Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... iTunes 12.4.3
العربية, English, Français, Español... Web Page Maker 3.22